Ixesha elizayo kwii-bitcoins: enye indlela yotyalo mali | Ezezimali
Un elizayo sisivumelwano esiphambili ekuxoxiswene ngaso kwimarike ehleliweyo ethi amaqela amabini azibophelele ekuthengweni nasekuthengisweni kwempahla ethile (ebizwa ngokuba yiasethi esezantsi) ngomhla wexa elizayo (umhla wokuhlawulwa) kwaye kunjalo ngexabiso elimisiweyoIxabiso eliqikelelweyo ngekamva. Kude kube ngoku eli klasi liqhelekile phakathi kwenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Banokuthatha isikhundla kuyo nayiphi na iasethi yezemali. Ukusuka ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya ukuya kuzo zonke iintlobo zeemarike zezabelo. Ukusuka kwizimali ukuya kwizinto ezingavuthiweyo okanye izinyithi ezixabisekileyo, njengezinye zezona zibalulekileyo.
Kodwa umkhuhlane wangoku wokuthenga i-bitcoins ukhokelele kwinto yokuba ukusukela ngoku kunokwenzeka ukuba kwenziwe olu hlobo lwemisebenzi ngale mali ibonakalayo. Akunakulityalwa ukuba yenye yeeasethi esele ikho Ihlaziyiwe kwiinyanga ezidlulileyo. Ngaphezulu kotyalo-mali ebithathwa njengengeniso kwaye inamandla kude kube ngoku. Kodwa kwilizwe lemali ukubonakala kweendlela ezintsha zotyalo-mali kuqheleke kakhulu. Kwaye le yeyona ndlela ilungileyo yokwenza kucace kubatyali mali Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngolu tyalo mali lukhethekileyo?
Ixesha elizayo ngoku yenye yeendlela ezilungileyo zokufumana imali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba unomdla wokwenza imali ngokukhawuleza, kodwa ngaphezulu kwako konke ngeendleko eziphantsi kakhulu ezinokubakho zeemveliso kunye neemveliso ezinokubanakho ukuphinda ziphinde ziqwalaselwe kukusilela kweemodeli zemveli kwiimarike zezemali. Ngokuchanekileyo ikamva kwi bitcoins yenye yezi mveliso. Olona luphawulwa ngaphezulu kwako konke ngokuba ngowokugqibela ukufikelela kwiimarike zezemali. Kwaye kubonakala ngathi uze nomnqweno wokuhlala kwaye kutsala inani elifanelekileyo labatyali mali Ukufuna ukufumana inzuzo eyomeleleyo yokwandisa ingxelo yayo yonyaka.
1 Ixesha elizayo kwii-bitcoins: inzuzo eninzi
2 Oomatshini bale mveliso
3 Kusetyenzisiwe kwiimarike ezilawulwayo
4 Zithini iimpawu zayo?
5 Ukuphelelwa ziikhontrakthi
6 Okwangoku ichaphazela i-bitcoins kuphela
Ixesha elizayo kwii-bitcoins: inzuzo eninzi
Ukuba le mveliso intsha yemali yahlulelwe into ethile, kungenxa yokuba ikuvumela ukuba uvelise inzuzo ebonakalayo ngokusebenza kwayo. Ewe kunjalo, uninzi ngakumbi kunolunye uhlobo lomsebenzi. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, kuya kufuneka ulumke ngakumbi kunesiqhelo kuba usengozini. Apho ungaphulukana nenxalenye elungileyo yenkunzi mali. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni ungafanelekanga ukutyala imali eninzi kolu hlobo lwemisebenzi ekhethekileyo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, isicwangciso-qhinga sakho kufuneka sijolise ekufezekiseni eyona mali yakho iphambili. Yindlela yokukhusela izikhundla zakho ukusukela ngoku.
Kwelinye icala, ikamva le-bitcoin lolunye uhlobo olunokuba lunomdla kakhulu ukukhusela umdla wakho njengomtyali mali omncinci nophakathi. Kodwa okoko nje unegalelo kwinkcubeko enkulu yemali okoko imisebenzi injalo nzima ngakumbi. Kwaye kuqala kukhethwa ukuba sele usebenze ngale mali ebonakalayo. Ayothusi into yokuba inqanaba eliphezulu lokufunda liza kuhlala liluncedo ukuze ukwazi ukufezekisa iinjongo zakho ngale asethi yezemali.
Oomatshini bale mveliso
Ukutyala imali kwikamva awuyi kukhetha kodwa ukuzibophelela Thenga okanye uthengise iasethi (isiseko) kuseto lwexesha elizayo ngoku iimeko zokuthenga okanye zentengiso. Kule meko ithathwe ekusebenzeni nale mali yedatha. Iziphumo ziya kuba mihle kakhulu, ngandlela thile. Kodwa ngononophelo olukhulu xa uqala iintshukumo kwiimarike zemali. Kuba nayiphi na impazamo ekubaleni kungakhokelela ekubeni ushiye ii-euro ezininzi endleleni.
Kwelinye icala, ikamva kwii-bitcoins zenziwa njengesicwangciso esifanelekileyo sokuqikelela. Ngokwenyani, ezi zizivumelwano ezilula phakathi kwabathengisi nabathengi onokuba yinxalenye yazo ukuba lo ngumnqweno wakho. Xa kuthengiswa Iimarike ezivulekileyo bayamkela kuyo nayiphi na imisebenzi. Oko kukuthi, ungazithenga uzithengise, kuxhomekeke kwimeko eyiyo yezi asethi zemali. Kodwa kunyanzelekile ukuba uqikelelo lube lolona lucebisayo kulowo nalowo msebenzi.
Kusetyenzisiwe kwiimarike ezilawulwayo
Ingxaki ephambili ekukhetheni ikamva lale mali kukuba kufuneka zenziwe kwintengiso elawulwayo. Kwaye ngale ndlela, i-bitcoin idweliswe kuphela kwimakethi ebalulekileyo yezemali ye Chicago, eUnited States. Ilawulwa ngokupheleleyo kwaye ikuvumela ukuba uthengise ikamva njengenye indlela yokwenza ukonga kwakho kunenzuzo. Kuya kufuneka uyazi ukuba ukurhweba ngesiseko ngokuqinisekileyo kunzima. Kwaye ke kuluncedo ngakumbi kwizinto ekuthiwa zivela kwimveliso, kwaye enye yezona zinto zibalulekileyo likamva. Kwaye kulapho unokukhetha khona le asethi yemali njengefashoni njenge-bitcoins.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba le mali sele ingene kwimvumelwano ngekamva leChicago kunye nemarike ephuma kuyo (i-CBOE). Kodwa iindaba ezimnandi kubatyali mali abanayo le asethi yemali kwi-radar kukuba ukusukela kule veki banenye intengiso abaza kusebenza kuyo. Yi-CME, a inkampani yorhwebo evela kwezinye. Umahluko ofanelekileyo ngokwexabiso lawo okoko ngeyokuqala kubo i-bitcoin ikhontrakthi yeyunithi enye, ngelixa lesibini kwizindululo lizii-bitcoin ezintlanu. Ngumahluko oxabiseke kakhulu phakathi kweemarike zombini zexesha elizayo.
Zithini iimpawu zayo?
Enye yeendlela onokuzibamba njengomtyali-mali omncinci nophakathi oyiyo sisalathiso sendlela ezisebenza ngayo ezi marike ngalo mzuzu. Ewe, enye yeempawu zayo ezibonakalayo kukuba ikamva lihlala livumela ukungahlawuli zonke Ixabiso lekhontrakthi, kodwa ngokuchaseneyo kuphela yinxalenye. Kwelinye icala, iikontrakthi zexesha elizayo ziyinto eqhelekileyo kwezinye iiasethi zemali. Umzekelo, ezo zithathwe kwimathiriyeli eluhlaza okanye kwizinyithi ezixabisekileyo, phakathi kwezinye zezona zibalulekileyo. Ngokwamkelwa okuphakathi ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kodwa ukuba kukho umahluko ophawula ezi mveliso zezezimali, ayikho enye ngaphandle kokungazinzi okuphezulu. Ikho phantse kuyo yonke imisebenzi yayo kwaye inendalo ekuhambeni kweemali ezikhoyo kwiimarike zezemali apho zidweliswe khona. Ngale ndlela, umahluko obanzi onokufumaneka ngokuhamba kwabo kwiimarike ubonakala kakhulu. Umahluko ongaphezulu kwe-5% okanye imiphetho enobundlobongela ethandwa ngabatyali mali abanoburhalarhume. Ngubani ofuna izibonelelo ezibanzi ixesha elide kakhulu.
Ewe kunjalo, enye yezona zinto zinomdla kwikamva le-bitcoin yile ibhekisa kwinto yokuba yintoni ukukhula kwabo. Ewe, azifani kodwa ngokuchaseneyo kuxhomekeke kwiimarike apho zidweliswe khona ezi zinto zikhethekileyo zemali. Ukusuka kule ndlela ngokubanzi, kwaye ke ukuze ube nombono osondeleyo wokusebenza kwayo, unekamva le-CBOE elinenyanga ezintathu ubudala. Ngeekhontrakthi inyanga nenyanga ukuze ibango lakho laneliswe. Ngelixa ngokuchaseneyo, kwenye intengiso yexesha elizayo, i-CME iya kuba yiminyaka emine kuphela, kunye nokuvuthwa ngoMatshi, ngoJuni, ngoSeptemba nangoDisemba.
Njengoko ubona, ukwenziwa ngokusesikweni kwemisebenzi kwikamva le-bitcoin kunzima ngakumbi kunezinye iintlobo zokusebenza. Nangona kunjalo, yi- imakethi engenayo eqala nje kwaye kulindeleke ukuba kwiminyaka ezayo amaxesha okuvuthwa kwayo anyuke. Ukuze ube neendlela ezizezinye zokwenza ukonga kwakho kunenzuzo kulo naluphi na uhlobo lwendlela. Kuba ngalo mzuzu uya kuba nokufikelela okulinganiselweyo kwezi marike zezimali. Kwaye kuyo nayiphi na imeko, ngaphandle kwemida yethu, njengoko kusengqiqweni, kwelinye icala, xa sithetha ngecandelo lekamva.
Okwangoku ichaphazela i-bitcoins kuphela
Ukuba ufuna ukwenza olu hlobo lwemisebenzi kuya kufuneka uyazi ukuba inikwe amandla kuphela kule mali yedijithali. Zonke ezinye zikude kule sekethe kutyalo-mali. Phakathi kwezinye izizathu, kucacile ukuba bambalwa ngokwemfuno evela kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ke ngoko, awunakukhetha ngaphandle kokusebenza ngokuthe ngqo kwizikhundla zabo. Ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokulamla kwaye ngaphandle kokuvuthwa kwexesha elizayo. Nangona kungenakukhanyelwa ngaphandle ukuba uza kujoyina eli qela likhethiweyo kule minyaka izayo. Ewe kunjalo, ngeendlela zotyalo-mali eziya kwahluka ngokupheleleyo kule mali ebonakalayo.
Ezi ziimveliso zezemali apho unokufumana khona imali eninzi, ngaphezulu kokukhetha ezinye kwii-equities, kodwa nangobungozi obuninzi. Kuya kufuneka ucace gca malunga neenjongo ofuna ukuziphumeza ngemisebenzi yakho. Ukuze ungaphambuki kwimigaqo ekufuneka ukuba le misebenzi yenziwe kuyo ukusukela ngoku. Nokuba yeyiphi na indlela, sele unenye into enokubakho ukuze ukwazi ukwenza ukuba ikapitali ityalwe izuze. Ngelinye ixesha ungadinga ezi zibonelelo zemali ukwenza imali kwiimarike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ixesha elizayo kwii-bitcoins: enye indlela yokutyala imali
Umnyama ngoNovemba kwimakethi yesitokhwe yaseSpain?